စိတ်ကျန်းမာရေး | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အမေရိကန်မှာတော့လူတွေလူတစ်ဦး၏ကျန်းမာရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုတွေ့မြင်. သူတို့ကလူအတော်များများစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိသည်ကွောငျးသိရ. အမေရိကန်တွေစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပြဿနာများတိုးတက်လာဖို့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေရေးအကြောင်းပြောဆို.
စိတ်ရောဂါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းကဲ့သို့ဖြစ်၏. အတော်များများကစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုလေးလေးနက်နက်မဟုတ်. ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအချို့အလွန်အမင်းအန္တရာယ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဆငျးရဲဒုက်ခစေ. အဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေစိတ်ကျန်းမာရေး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အကူအညီတောင်းကိုယ်တော်တိုင်သို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ်ဦးမေးမြန်းဖို့ရှက်သို့မဟုတ်ကြောက်လန့်ခံစားရသင့်တယ်. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအကွံဉာဏျ, ဆေးဝါးနှင့်အခြားကုသမှု၏ပြဌာန်းချက်များတွင်ကူညီနိုင်သည်.
စိတ်ဖိစီးမှုအလုပ်သို့မဟုတ် home ဘဝ
ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်နာမကျန်းမှုကြောင့်ရှိခံစားချက်တွေကိုနှင့်အပြုအမူများမှာ. အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ရောဂါများနှင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာရှိပါတယ်. အသုံးအများဆုံးလက္ခဏာတွေဝမ်းနည်းမှု, ကြောက်ရွံ့ခြင်း, အမျက်ဒေါသ, စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ, ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူများမှာ. စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လေးနက်သောနာမကျန်းနှင့်အတူအားလုံးဘုံလက္ခဏာတွေအားကောင်း. ပြည်သူ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဆက်လက်နိုင်ရင်. သူတို့ဟာအစစ်အမှန်သို့မဟုတ်အစစ်အမှန်မဟုတ်သောအရာကိုမသိစေခြင်းငှါ.
စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု Disorder post
စိတ်ရောဂါစိတ်ရောဂါအတွက်အထူးပြုသမားများမှာ. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်သည်အခြားစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူစိတ်ရောဂါကုသရန်ဆေးဝါးသတ်မှတ်စေခြင်းငှါ. မကြာခဏစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်စိတ်ရောဂါ၏အဆိုးဝါးဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဂရုစိုက်.
စိတ်ပညာရှင်ဆရာဝန်များမဟုတ်. ရှာဖွေရေးမှာများနှင့်ဆက်ဆံပါစိတ်ရောဂါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ဆေးဝါးသတ်မှတ်ကြဘူး. ရောဂါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ရောဂါဆေးပညာနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးစိတ်ရောဂါသည်သင်၏ရောဂါဆရာဝန်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်လိုထင်လျှင်, ငါသင်ဤပြောပြပါ့မယ်.
စိတ်ကျန်းမာရေးသူနာပြုများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုများနှင့်ကုသ. သူတို့ကပုဂ္ဂလိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာရုံးများအလုပ်လုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအတူလုပ်ကိုင်စေခြင်းငှါ. သူတို့ကစိတ်ရောဂါကနျြးမာရေးအတှကျအဆေးဝါးများသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်.
သည်အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားရစရာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုလိုင်စင်ရှိပါတယ်. သူတို့ကတိုင်ပင်မှူးမတ်, ကုသနှင့်လူမှုရေးလုပ်သားများပါဝင်သည်. သူတို့ထဲကတချို့ကဤသို့သောအိမ်ထောင်ရေး, မိသားစု, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဒဏ်ရာအဖြစ်, တဦးတည်းဧရိယာအာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ.
ဆေးရုံများ, ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းများတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပျပေးသူ. သင်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာနှင့်အတူအကူအညီလိုအပ်ပါကသင်၏ပုံမှန်အတိုင်းဆရာဝန်ကိုမေး. သင့်ဆရာဝန်ရုံးခန်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အထူးကုဖြစ်နိုင်သည်.
တခြားသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရာမှပြန်လည်နေရာချထားဒုက္ခသည်စိတ်ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကိုကွဲပြားစေခြင်းငှါ. စစ်ပွဲ, ဘေးအန္တရာယ်, နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားနှင့်အတူအတိတ်အတွေ့အကြုံစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၏အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူခဲ့ကြသူဒုက္ခသည်တွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်. သငျသညျထိုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်သောပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစင်တာတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်
သင်သည်သင်၏အတိတ်အကြောင်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေးမေးခွန်းများကို၏လယ်ပြင်တွင်အလုပျသမားဟုမေးပါလိမ့်မည်. သူတို့ဟာပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့အခွအေနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုခငျြနှငျ့သငျပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီ. ဒါဟာဒုက္ခသို့မဟုတ်ခက်ခဲဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်သင့်အတွေ့အကြုံများအကြောင်းပြောဆိုရန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်, သင်မူကားစိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ကြောင်းကိုနားလည်ရန်ရှိသည်. သူတို့ကိုဘာမှမပြောပြရန် Ajbrook မည်မဟုတ်. သင်သည်သင်၏အသက်တာအကြောင်းကိုပဲအနည်းငယ်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူစတင်ချင်လျှင်, ထိုအတူမှားယွင်းတဲ့အရာမရှိ.
အဖွဲ့အစည်းကိုသင်ကစိတ်ကျရောဂါ, သတ်သေ, အမျက်ဒေါသနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကိစ္စများတွင်အကူအညီရရန်နေ့ရက်ကိုမဆိုအချိန်မရွေးသူတို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်.
ထိုအပုံမမှန်အကြောင်းကအရမ်း Ahaiaan ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လို.